China BL6141 Icwecwe engaphandle Rotor BLDC Fan iimoto ukwenziwa kunye mveliso | Staba
I-BL6141 Icwecwe langaphandle leROTDC yeFan Motor
Igama lemveliso: Icwecwe langaphandle leRotter BLDC yeFan Motor
Umzekelo No .: BL6141
Ikaliwe Amandla: 9.6W
Isantya esikaliwe: 1385RPM
Iimbonakalo: Ukusetyenziswa kwaMandla asezantsi / Ubungakanani beCompact / Ukulula ukuhlangana / Rotor engaphandle / ukuhlala ixesha elide / ingxolo ephantsi / ixesha elide lobomi
Isantya (RPM): 1,860 1,385 805
Okwangoku (A): 0.12 0.629 1.53
I-Torque (NM): 0 0.067 0.184
Imveliso yamandla (W): 2.28 9.68 15.55
I-BL6141 Icwecwe langaphandle leRotter BLDC yeFan Motor idityanisiwe iStaba iminyaka eli-10 ye-DC yokwenziwa kweemoto kunye namava okuvelisa ukuphuhlisa ngokukodwa uMbane weBlDC Motor Solutions. Xa kuthelekiswa neefeni zombane zangaphambili ezixhotyiswe ngee-AC Motors, iifeni zombane zisebenzisa i-brushless DC Motors ngokusetyenziswa kwamandla okuphantsi.
I-BL6141 Compact Outer Rotor BLDC Fan Motor isebenza kwi-24VDC kwaye ibonelela nge-1385RPM ngesantya esiphezulu ekusebenziseni amandla asezantsi kakhulu kwi-9.6W.
I-Staba Motor iya kuqhubeka nokwenza isisombululo seFan Motor Solution, ukuze siyile kwaye sivelise encinci, ukuKhanya, ukuGcina ukuSingqongileyo kunye nokuGcina amandla, uLawulo lweFan Intelligent, uMmiselo weSantya ongenasantya, uLightweight kunye noKhuseleko lweNdalo.
Egqithileyo I-BLN5560 Fascia Gun Ingaphandle yeRotor ye-BLDC yeeMoto
Okulandelayo: I-BL75120 BLDC yeFan Motor
Abalandeli bakaMbane iiBrushless DC Motor Solutions
Abalandeli boMbane yenye yezona zinto zisetyenziswayo kwizixhobo zasendlini. Zineentlobo ezininzi kwaye zisetyenziswa ngokubanzi. Nangona kunjalo, abaFane bakaMbane ngoku basebenzisa ii-AC motors ngamandla aphakamileyo, zihlala ngaphezulu kwe-60 watts, esebenzisa amandla amaninzi. Njengesixhobo esincinci sendlu ekufuneka sivulwe ixesha elide, ukusetyenziswa kwamandla, ingxolo, kunye nesantya somoya zezona ndlela zichanekileyo zokujonga imveliso. Iimveliso zeFan Electric, imoto yenye yezona zinto zibalulekileyo.
Uninzi lwabalandeli boMbane kwimarike ngoku basebenzisa ii-AC zemveli, ezinobomi obunomda kwinkonzo, ulondolozo olungafanelekanga, ukusetyenziswa kwamandla okuphezulu kunye nolawulo lweemoto ezisezantsi. Ukwanelisa abantu kwiimeko ezahlukeneyo zokusetyenziswa kunye nokusetyenziswa okungafaniyo, uluhlu olubanzi lwezantya ezinokuhlengahlengiswa, ingxolo ephantsi, ubomi benkonzo ende, kunye neendlela ezahlukeneyo ziyafuneka ngokweemeko ezahlukeneyo zokusetyenziswa. Iimoto zemveli ze-AC azinakho ukufikelela kwezi mfuno zingasentla.
Ukusombulula la manqaku angaphezulu entlungu, iStaba Motor yadibanisa iminyaka eli-19 ye-DC ulwenziwo lweemoto kunye namava okuvelisa ukuba aphuhliswe ngokukodwa IziXhobo zeZithuthi zoMbane zeBlDC. Xa kuthelekiswa neFans zombane zangaphambili ezixhotyiswe ngeemoto ze-AC, iiFeni zombane zisebenzisa i-brushless DC motors ngokusetyenziswa kwamandla asezantsi kunye nokusebenza ngokukuko. Ngaphandle kwaMandla-oGcino kunye noGcino-Power, xa kuthelekiswa nomoya oqhelekileyo we-AC ngemo yokujikeleza kwesantya esingaguquguqukiyo malunga neegiya ezi-3, nditsho nemoto ye-Brushless DC yemoto inokubeka isantya ngokuthanda. Ngelixa kufezekiswa uhlengahlengiso lwesantya somoya esineebhloko ezininzi, inokuxhotyiswa ngemo yomjikelo ontsokothileyo wemowudi ejikelezayo. Ngalo msebenzi, nokuba ujongene neFan Yombane ixesha elide, awuyi kuziva ungonwabanga ngenxa yeVolthi yomoya egqithisileyo.
Kwakhona, iStaba Motor iya kuqhubeka nokwenza isisombululo kwiFan Motor Solution ukuze yenze i-BLDC Motor incinci, ikhaphukhaphu, inobuhlobo ngakumbi kokusingqongileyo kunye nokonga umbane. Injongo yethu kukuhlangabezana nefeni yolawulo olukrelekrele, umgaqo wesantya ongenanyathelo, ukukhanya okulula, ukonga umbane, kunye nokhuseleko kwindalo esingqongileyo.
I-Stana Motor ineminyaka ephantse ibe li-10 yamava kubunjineli bokwenza ulwenziwo, ngakumbi kwiFan Electric ifumene idatabase enkulu yeMotot Prototype yesalathiso sabathengi okanye ukhetho, isilawuli sokudibanisa, okanye isincoder, ngokukhawuleza ngokweemfuno zabathengi ukwenza isisombululo semoto ukuhlangabezana okanye ukudlula imfuno zabathengi. I-Staba Motor ibingumboneleli weemoto othembekileyo kunye nomenzi ukusukela ngo-2010. Ngolwazi oluthe kratya kwiSisombululo soMbane seBlue BLDC, Nceda unxibelelane nathi.
I-BLDC yeFan Motor
I-BLDC Motor yeFani yaseKhaya
Imoto ye-Brushless DC yemoto yasekhaya
Imoto engenabhrashi kwiFeni yaseKhaya
Icwecwe elingaphandle leRotor
Icwecwe langaphandle leRotter BLDC yeFan Motor
I-Eco BLDC Imoto yeFani yaseKhaya
Imoto ye fan
I-FOC BLDC Imoto yeFani yaseKhaya
Ulawulo lweMoto yeFOC yeFan Ekhaya
Imoto yeFOC yeFan yasekhaya
Ukuzinza okuphezulu kwe-BLDC iimoto kwiFan yasekhaya
Ukusebenza okuPhezulu kweBlDC yeeMoto kwiFeni yaseKhaya
Isantya esiphakamileyo se-BLDC seMoto seFani yaseKhaya
I-Torque ephezulu ye-BLDC yeeMoto zeFani yaseKhaya
Ixesha elide lobomi beBMDC yeMoto yeFanitshala yaseKhaya
Ukusetyenziswa kweMoto esezantsi yeBMDC yeMoto yasekhaya
Ingxolo ephantsi ye-BLDC iimoto zeFanitshala yasekhaya
Imoto yeFan yasekhaya
I-BL75120 BLDC yeFan Motor
I-BLN4260 Ingxolo engezantsi engenabala yeFan ye-BLDC yeemoto
I-BLDC yeFan Motor, Imoto, I-DC engenazithuthi, I-Brushless Motor, Imoto yeBLDC, Ivacuum yococa, yophando pricelist